सिन्दुर हालेपछि बेहुलीले ‘म तिमीलाई चिन्दिन’ भन्दिइन् ! बेहुलाले पि’ए वि’ष (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सिन्दुर हालेपछि बेहुलीले ‘म तिमीलाई चिन्दिन’ भन्दिइन् ! बेहुलाले पि’ए वि’ष (भिडियो हेर्नुस्)
सिन्दुर हालेपछि बेहुलीले ‘म तिमीलाई चिन्दिन’ भन्दिइन् ! बेहुलाले पि’ए वि’ष (भिडियो हेर्नुस्)
3,205 1 minute read
काठमाडौ । चितवनको कालिका नगरपालिकामा भएको एक घटनाले अहिले चर्चा पाएको छ । १७ वर्षकी अनिषा कुमालको २१ वर्षका कञ्चन तिमिल्सेनासंग करिब ६ महिना देखि प्रेम थियो । उनीहरुले पुष १९ गते काठमाडौमा युवकको आमाकै अगाडी विवाह गरे । विवाहको तस्बिर र भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ ।
तर अहिले युवतीले विवाह अस्विकार गरेपछि युवकले वि’ष से’व’न गरेका छन् । युवक अहिले पनि अ’चे’त अवस्थामा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यो घटनामा युवती र युवकको आमाको कुरा बाझिएको छ । युवकको आमाले युवतीले नै विवाह गरेनस् भने मेरो अन्तै विवाह गरिदिन्छन् म वि’ष खा’न्छु भनेर युवतीले भनेका कारण युवकले सिन्दुर हालिदिएको आमाले बताएकी छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
तर युवतीले भने आफुलाई युवकले एकतर्फी माया गरेको बताएकी छन् । सिन्दुर नहाली म तिमीलाई माइत जान दिन्न भनेर युवकले भनेका कारण आफु विवाह गर्न राजि भएको बताएकी छन् । तर युवती चितवनवाट काठमाडौसम्म युवकसंग पुगेकी थिइन् । युवकको आमा काठमाडौमा ज्यामी काम गर्थिन । उनीहरु काठमाडौमा रहेको आमाको कोठामै विवाह गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ ।
युवतीको माइतीले विवाह छुटाइदिएका कारण यस्तो घटना भएको युवकको आमाको आरोप छ । उनीहरुले पुष १९ गते युवकको आमाकै अगाडी विवाह गरेका थिए । कालिका नगरपालिका चितवनमा रहेकी यि महिला अहिले छोराको बोली सुन्न नपाउँदा निकै पी’डित भएकी छन् ।